अङ्ग प्रदर्शन गरेर बलिउडमा टिकेका यी ५ अभिनेत्री | नेपाली जनता :: Nepali Janta:
प्रकाशित मिति ६ जेष्ठ २०७६, सोमबार १६:०० लेखक नेपाली जनता
एजेन्सी । विश्वमै सफल मानिएको बलिउड उद्योगमा अभिनेता र अभिनेत्रीहरु पनि उत्तिकै प्रतिभाशाली छन् । उत्कृष्ट अभिनय शैलीका कारण समय समयमा संसारभरीनै तारिफ बटुलिरहेका हुन्छन् भारतीय कलाकारहरु ।
त्यसमा सुन्दरता र अभिनय क्षमताका कारण बलिउड अभिनेत्रीहरु सबैको नजरमा योग्य छन् तर बलिउडमा नै यस्ता केही अभिनेत्री छन् जो बोल्ड तस्बिर र भिडियोको कारण मात्र टिक्न सकिरहेका छन् । जोसँग अभिनय क्षमता भन्दा पनि पर्दामा देखिने उनीहरुको बोल्ड सीनका कारण मात्रै फिल्म चलिरहेको छ ।
सुन्दरताको विषयमा कोही भन्दा कम छैनन् उर्वशी रौतेला । सनी देओलसँग फिल्म ‘सिंह साहब दी ग्रेट’ बाट बलिउडमा डेब्यु गरेकी रौतेलाका पछिल्ला फिल्महरु परिवारसँग बसेर हेर्न सकिदैन । फिल्म ‘हेट स्टोरी– ४’ मा उनले दिएको दृश्यमा ‘बोल्डनेस’ को सीमा नाघेको छ ।
बलिउडका सुपरस्टार सलमान खानको फिल्म ‘वीर’ बाट फिल्म क्षेत्रमा पाइला टेकेकी खानको उक्त फिल्म निकै चर्चित भयो । जुन फिल्म पारिवारिक फिल्म थियो । तर त्यसपछि उनले गरेका कुनै पनि फिल्म पारिवारिक रहेनन् ।
सामाजिक सञ्जालमा बोल्ड तस्बिरकै कारण प्रायः चर्चामा आइरहने अभिनेत्री हुन् ईशा गुप्ता । उनले पहिलो फिल्ममा दिएको ‘हट’ सीनका कारण उनका पछिल्ला सालीन पात्रको रुपमा गरेको अभिनयलाई पनि दर्शकले स्वीकार गरेनन् । अहिले उनी बोल्ड फोटोशुटमै लिप्त छिन् ।
करियरको सुरुवातमा उनका फिल्महरु सफल भए । उनी पनि सफल अभिनेत्रीको रुपमा परिचित भइन् । तर विस्तारै फिल्म चल्न छोडेपछि उनले अंग प्रदर्शनको साहारा लिइन् तर उनलाई त्यो उपायले पनि साथ दिन सकेन
बलिउडमा प्रवेश गर्नुअघि ‘पोर्न स्टार’ रहेकी उनको परिचय नै खराब थियो । उनलाई आइटम गीतमा धेरै काम गराइयो र मुख्य भूमिकामा कम । उनलाई बलिउडमा फिल्म चलाउनकै लागि मात्र प्रयोग गरिएको छ ।
सशस्त्र प्रहरीको दुरुपयोगः ब्यापारीदेखि ठेकेदारलाई सुरक्षाकर्मी र चालक
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशन अनुसार नेपाल प्रहरीले भीआईपी र उच्च सुरक्षा निकायका अधिकारीका घरमा नियमविपरीत रहेका…
नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गर्नेमा सेनाका ठेकेदार बिजय श्रेष्ठ पनि मुछिए
काठमाडौं । नक्कली भ्याटबिल प्रयोग गरी राष्ट्रको राजस्वमा हानीनोक्सानी पुर्याउनेहरुमा निर्माण ब्यवसायीका अलावा सेना र प्रहरीमा सामान आपूर्ति गर्ने…
गृह मन्त्रालयको सहसचिव भन्दै साढे पाँच करोड ठगी
काठमाडौं । गृह मन्त्रालयको बहालवाला सहसचिव बताउँदै साढे पाँच करोड ठगी गर्ने रौतहट गौर–१ का ५७ वर्षीय सत्येन्द्र यादवलाई…
खराब काम गर्ने प्रहरीलाई एक नम्वर प्रदेशका डिआईजीले दिए चेतावनी
काठमाण्डौ । एक नम्वर प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डिआईजी केदार रिजालले इमान्दार र पारदर्शी भएर काम गर्न प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन…
चुहिने छाना, चिसो भुइँ, अँध्यारो कोठामा अनशन
काठमाडौं । जिल्ला खेलकुद विकास समिति जुम्लाको कभर्ड हलको छाना चुहिने छ, भुइँ चिसो छ, कोठा अँध्यारो छ ।…
भारतमा योगी आदित्यनाथ र मायावतीलाई चुनावी प्रचारप्रसारमा प्रतिबन्ध !
काठमाडाैं । आम निर्वाचन चलिरहेका बेला भारतमा दुई जना प्रभावशाली नेतालाई निर्वाचन प्रचारप्रसारमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।भड्किलो र निर्वाचन…
ज्ञानेन्द्र शाहीलाई प्रहरीले हिरासतमा राख्यो
प्रहरीले घुस मागेको भन्दै सडकमा माछा फालेर एक महिलाले विरोध प्रदर्शन
टीआरसीलाई बदला लिन प्रयोग गर्ने प्रयास भयो : प्रचण्ड
चावहिलको शव जलाउने घाटमा नाराबाजी
इन्द्रजात्रामा पक्राउ परेकाहरुलाई रिहा गर्न राप्रपा संयुक्तको माग
पत्रकार सम्मेलनस्थलबाट ज्ञानेन्द्र शाही पक्राउ
भाडामा बस्नेसँग जथाभावी महसुल नउठाउन घरबेटीलाई प्राधिकरणको आग्रह
रुपन्देहीमा अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट एकको मृत्यु
ठगीको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ
गृहमन्त्रीको जवाफले कांग्रेसको चित्त बुझेन, संसद अवरुद्ध
कैलालीमा मेयरको कार्यकक्षमा आगजनी
असोज देखि कात्तिक १७ सम्म उड्ने हवाई भाडामा १० प्रतिशत छुट
शिशु विक्री प्रकरणः बाल संगठनका निर्देशकलाई जेल चलान गर्न अदालतको आदेश
टीआरसीलाई बदला लिन प्रयोग गर्ने प्रयास भयो : प्रचण्ड 33 views
पत्रकार सम्मेलनस्थलबाट ज्ञानेन्द्र शाही पक्राउ 20 views
रुपन्देहीमा अज्ञात व्यक्तिको गोली प्रहारबाट एकको मृत्यु 17 views
शिशु विक्री प्रकरणः बाल संगठनका निर्देशकलाई जेल चलान गर्न अदालतको आदेश 14 views
भाडामा बस्नेसँग जथाभावी महसुल नउठाउन घरबेटीलाई प्राधिकरणको आग्रह 12 views
चरेस र गाँजासहित ५ जना पक्राउ 10 views
म बिस्तारै उहाँको शरीरमा घोडा चढे…. (यौन कथा)9views
ठगीको आरोपमा भारतीय नागरिक पक्राउ7views